10 waxyaabo aad u baahantahay inaad ogaatid ka hor intaanad qaadan DMAA | AASraw
/blog/Gallery/ Waxyaabaha 10 waxaad u baahantahay inaad ogaatid kahor intaadan qaadan DMAA
Posted on 11 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
DMAA waa mukhadaraad la soo saaray oo ka caawisa dhismaha jirka, gubashada dufanka jirka iyo hagaajinta xasuusta gaaban iyo ficil celin gaaban. Maqaalkani waxaa ku jira faa'iidooyinka qiyaasta daawada ee DMAA iyo saameynaha suuragalka ah ee 1,3-dimethylamylamine.
Understanding waa maxay is DMAA waa inay ahaataa mid ka mid ah waxyaabaha waxqabadka leh ee kor u qaadaya cayaaraha waa in uu xoogga saaraa ka hor inta uusan hoos ugu dhicin isticmaalka dheeraadka ah. DMAA oo ah qaabka gaaban ee dimethylamylamine kiimikada waa daawo hore loo aaminay inuu yahay wax laga soo saaro saliidda dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo loo marayo cilmi-baaris, waxaa la aasaasay 1, 3 dimethylamylamine waxaa lagu soo saaraa shaybaarro.
Sidoo kale loo yaqaan 1,3 DMAA, daroogadu waxay wadaagaan qaab isku mid ah oo leh germanyum laga soo qaato daroogooyinka. Tani waxay ahayd sababta ay dad badani u maleynayeen in DMAA ay sidoo kale ka tirsan tahay isla daroogada. Waxbarashada hore ee DMAA waa erey la mid ah dadka isticmaala xoojinta maaddaama ay inta badan isticmaalaan kuwa doonaya inay bilaabaan jirkooda iyo jaranjarada.
Budada DMAA waxaa markii ugu horeysay lagu soo iibiyay by Eli Lilly iyo Company ee 1944. Daroogada ayaa laga helay isticmaalka badan ee daawada sida adkeesto sanka ah. Daawada ayaa loo isticmaalay ujeedadaas iyada oo la ogaaday inay natiijooyin isku mid ah u keentay isticmaalka ephedrine iyo pseudoephedrine.
Markii ugu horraysay, dad badan ayaa aaminsanaa in DMAA laga soo saaray saliid geedka geranium. Sababtaas awgeed, waa wax caadi ah in la helo shirkado badan oo soo saara Kaalmada DMAA taas oo muujinaysa sawirada qaybaha geedka geedka geranium sida geedka iyo xididdada. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay taasi aaminsan tahay in muddo dheer, imtixaannada shaybaarka ee DMAA ayaa si kale u muujiyay.
Waxaa la caddeeyey in DMAA si firfircoon looga heley shaybaarka mana aha sida dabiiciga ah sidii la rumaysan yahay muddo dheer. Ka dib markii ugu horeysay ee suuqa lagu iibiyo, daroogada ayaa si weyn loo iibiyay madaama cayaartoyda ay soo dhaweeyeen natiijooyinkooda. Tani waxay ahayd ilaa 1983 marka laga soo saaro suuqyada.
Dib u celinta waxaa sababay sheegasho ah inaanay ammaan ahayn iibinta farmasiyada dadweynaha. Xayiraaddan ayaa sababtay in yaraanta daroogada inkasta oo ay weli ku jirtay suuq madow. Saleecada guud ee DMAA ayaa dib loo bilaabay 2006 markii ay ku iibsatay magac cusub, Geranamine.
Kaalmada DMAA laguma iibin. Taa bedelkeeda, waxaa lagu daray miisaanka luminta miisaanka waxaana loo aqoonsaday inuu yahay daroogada horumarinta ciyaaraha fudud. Dib-u-soo-saarka daroogada ee kiimikada caamka ah ayaa ku baaqay muran badan oo ku saabsan nabadgelyada isticmaalka cayaaraha kor u qaadaya.
Walaacayaashu waxay ahaayeen kuwo aad muhiim u ah in Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA) ay heystaan ​​inay weydiistaan ​​kuwa soo saaraha waxtarka si loo caddeeyo suurtogalnimada isticmaalka iyadoon waxyeelleyn waxyeello. Wadamada sida Kanada oo kale ayaa walaac ka muujiyay ujeedooyinkooda, waana la mamnuucay.
Sidoo kale maaha amaan u adeegsiga adoo tartamaya cayaaraha sida 2010, iyo Hay'adda Caalamiga ah ee Doping-ka ayaa dhawaan ku qortay maaddo waxyeello leh oo la mamnuucay isticmaalka. Sidaa daraadeed, cayaartu waxay ogaatay in ay isticmaalayso daroogada ay u badan tahay inay ka mamnuucdo ka qaybgalka ciyaaraha tartanka. Sababtoo ah muranada la xidhiidha isticmaalka, DMAA ayaa sidoo kale mamnuucaya ciidamadda Mareykanka.
Caawimada dheeraadka ah ayaa dhowaan laga saaray dukaamada militariga si loo xakameeyo isticmaalka. Waddanka New Zealand, isticmaalka daroogada looma oggola. Waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay tahay sharci darro Mareykanka hadda.
Waa maxay DMAA loo isticmaalo?
Habka shaqada ee dhabta ah, DMAA looma xaqiijin. Si kastaba ha ahaatee, daroogada ayaa loo maleynayaa inay la jaanqaado ficilka adrenaline dabiiciga ah. Marka la isticmaalo, DMAA waxay si toos ah u saameysaa habka dhexe ee neerfayaasha.
Daawada waxaa loo yaqaanaa inay soo saarto kicinta sare taasoo ah mid la mid ah isticmaalka kafeyn. Si kastaba ha noqotee, qaabka ficilka DMAA wuu ka duwan yahay kan caffeine. Marka la qaato, DMAA waxay keenaysaa soo saarida noradrenaline kaas oo ah hoormoon loo isticmaalo inta lagu jiro xilliyada caadada ama cabsida.
Hormarka waxaa lagu soo dejiyaa qanjirrada adrenal ee laga helo kore kelyaha. Marka la sii daayo, hormoonku wuxuu ku wareegayaa dhiigga, taasina waxay sababtaa kor u kaca heerka wadnaha.
Wax soosaarida noradrenaline waxay sidoo kale ka dhigaysaa nidaamka jirka si uu u sii daayo glucose ka soo kaydka glycogen. Tani waxay keenaysaa in korodhka tamarta ee muruqyada jidhka, iyo tan ay tahay waxa ugu badan ee cayaartoyda jecel ka hor tababarka. Isticmaalka DMAA waxay sidoo kale horseedi doontaa horumarinta qaar ka mid ah dhinacyo sida feejignaanta, dhiirigelinta iyo falcelinta waqtiga.
Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee DMAA si weyn looga isticmaalo cayaaraha kahor inta aan la bilaabin fadhiga tababarka. Daroogadu waxay bixisaa dareemo tamar sare ah oo cayaaraha fududi doonayaan in ay ka qaybqaataan waxqabadka kaasoo isticmaali doona tamarta xad-dhaafka ah. Isticmaalka DMAA ayaa badbaadiyay ciyaartooyda laga soo bilaabo celceliska dareenka tamarta ee la socota ficilada caffeine caadi ahaan loo isticmaalo.
DMAA waa horumarinta kaafeyn, iyo kuwa isticmaala muddo dheer waxay bilaabi karaan inay sameeyaan mukhaadaraad. Taas macnaheedu waa isticmaalka kontoroolka waa muhiim. Marka la isticmaalo, waxay maskaxdeedu ka dhigtaa maskaxda si ay u abuurto dareemid koronto xoog leh.
Dhiig kaca ah ee cadaadiska dhiigga ayaa sidan u socda. Sababtoo ah qaabkan ficilka ah, dad badan ayaa u muuqda inay ku xad gudbaan daroogada. Si kastaba ha noqotee, cayaartoyda qaarkood waxay u isticmaalaan daroogada iyaga oo leh ujeedo waxtar leh oo ku saabsan jirkooda. Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah isticmaalka wanaagsan ee DMAA:
Badanaa, jidhku si dabiici ah ayuu u gubayaa dufanka xad-dhaafka ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay ku dhici kartaa heer hooseeya marka loo eego waxa loo baahan yahay. Si aad u joojiso nidaamka isticmaalka dheeraadka ah ayaa lagu ansixiyey hannaanka kor u qaadista cayaaraha. Inta badan qaar ka mid ah waxyaabahan dheeraadka ah ayaa ah steroids sida Nootropics.
Isticmaalidda noocyada dheeraadka ah waxay si fiican u hagaajiyaan heerka gubashada. DMAA waxay waxtar u leedahay sida tan kale ee la yaqaan ee gubashada dufanka xad-dhaafka ah. Kulannada tababarka badankooda waxaa loogu talagalay in lagu gaaro natiijooyin tiro badan, oo ah madax iyaga ka mid ah oo ah in la yareeyo dufanka jirka ee xad-dhaafka ah kaas oo siinaya jirka rafcaan aan loo baahnayn.
Dufanka xad-dhaafka ah ayaa sidoo kale khatar ugu jira fayoobka cayaaraha sababtoo ah xaalad sidan oo kale ah ayaa xoojin karta xannibaadda dhiigga. Marka tani dhacdo, waxaa jiri doona socod yar oo oksijiin ah oo dhiigga ah iyo hawlaha guud ee qofka ayaa si aad ah u saameeya. Hadda furaha looga hortago xaaladdan oo kale waa iyada oo loo marayo isticmaalka daroogada sida DMAA oo jidhkaaga siinaya heerar sarreeya.
Marka uu firfircoon yahay, isticmaaluhu wuxuu ku fekerayaa in uu ka shaqeeyo waxqabadyada u adeegsanaya tamarta, iyo natiijada, waxaa jiri doona hoos u dhaca dufanka jirka ee waxyeellada leh ama aan loo baahneyn. Daawada ayaa lagu ogaaday in ay aad wax ku ool u tahay gubashada dufanka jirka , waana arrin muhiim u ah ciyaartoyda doonaya in ay gaaraan tan gaar ahaan inta lagu jiro goynta boobka. Waxtarnimada daroogada ayaa ku dhawaad ​​xaddidan.
Marka ay la socoto kiciyaha sida kafateekiga, DMAA ayaa lagu helay inay hagaajinayso dhaqdhaqaaqa jidhka jirka ee ku saabsan 35%. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxay gacan ka geysaneysaa in la hagaajiyo heerarka gubashada dufanka leh marin weyn oo la arki karo. Daroogadu waxay u shaqaysaa hubinta in ay kiciso baruurta gubanaysa ka hor intaanay jirku soo saarin si uu u daboolo dabiiciga.
Marka tallaabada DMAA ay si toos ah ugu xiran tahay habka dhexe ee dareenka, daroogadu waxay xaqiijinaysaa in tallaabadani ay xoojinayso tallaabooyinka degdegga ah. On stimulation, CNS waxay ka soo horjeedaa by indho-indha-indheysashada silsiladaha oo u oggolaanaya baruurta gubanaya. Sidaa daraadeed, waxay noqon laheyd mid sax ah oo lagu barbardhigo ficilada DMAA iyo kuwa kale ee dufan ee gubanaya ee suuqa.
2. Dhismaha Jidhka
Waxyaabaha ugu muhiimsan ka hor tababarka waa tamar. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad eegto waxa laga yaabo in ay ku siiyaan farsamooyinkaan tamarta si aad horay u sii wadato. Mesomorph pre workout dmaa
waa nooc ka mid ah in la siiyo dhisaha jirka ee bilawga bilawga ah ee ku haboon ee aad u baahan tahay si aad u sameyso tababarkaaga guuleysta.
Sida horay loo qorey, daroogada ayaa loo yaqaanaa inay bixiso saameyn la mid ah pseudoephedrine. Daawadan ayaa heli doonta isticmaalaha qaab 'sare'. Tani waxay bixisaa mid leh kaydka tamarta ee weyn taasoo lagama maarmaan u tahay culeyska culeyska.
Natiijada ugu fiican, daroogada bixisa tamar sare waa in la qaato ka hor inta aan la qaban casharka. Tani waxay u isticmaali doontaa isticmaalaha tamarta oo ah sida kaliya ee wax walba oo kor u qaadaya cayaartoyda ay u baahan yihiin si ay u helaan maalmo ay ku bilaabaan qoraalo sare. Daroogada noocan oo kale ah waxay tan ku sameeyneysaa saameynta mid ka mid ah hababka dabiiciga ah ee jidhka.
Marka la qaato, daroogadu waxay sii wanaajisaa dheecaanka. Tani waa geedi socodka sida caadiga ah marka uu jiro kuleyl aad u sarreeya jawiga. Jidhku wuxuu ka soo jeedaa kor u qaadista xajmiga xididdada. Tani waxaa loola jeedaa in la keeno dhiig badan oo dusha sare ee maqaarka loogu talagalay qaboojinta.
Inta badan daawooyinka waxtarka leh ee waxtarka leh waxay ka koobanyihiin nitrric oxide oo kor u qaadaya marinnada dhiigga iyadoo loo marayo dheecaan ku dhalatay. Tani waa faaiido dheeraad ah oo loogu talagalay cayaaraha, gaar ahaan inta lagu jiro a tababarka hore. Marka weyn, meesha dusha sare ee lagu qaado dhiig badan, waa mid aad u sarreeya.
Tani waxay siin doontaa cayaaraha iyadoo la siinayo dhaqdhaqaaq dhiig ah oo aan weligiis haysan ka hor inta isticmaalka daroogada. Ka dibna, tababarka xoogan ayaa suurtagal ah, iyo cayaartu waxay leedahay tamar badan si kor loogu qaado horumarinta murqaha.
Si kastaba ha noqotee, isticmaalka DMAA marka la eego ixtiraamkan waxaa la ogaaday inay ka soo horjeedaan waxa dadka intooda badan ka filanayaan daaweynta kor u qaadaysa. Intii aad ku sii wanaajin laheyd daweynta viodilidation sida daawooyinka ugu badan ee nitric oxide, DMAA waxay ka soo horjeedaa. Waxay sababtaa walxo-falka oo caadi ah inta lagu jiro muddooyinka marka heerkulka cimiladu hoos u dhacdo.
Waqtigaas oo kale, jidhku wuxuu ku dhibtoodaa inuu ilaaliyo heerkulkiisa, tanina waxay keentaa dhiigga ka soo baxa dusha maqaarka. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxay dhacdaa marka qiyaasta qadarku ay aad u sarayso ayna tahay in aanay walwal aheyn qof qorshaynaya inuu qaato DMAA.
3. Waxay ka caawisaa hagaajinta xusuusta gaaban iyo ficil celin waqti gaaban ah
Qof kastaa wuxuu jeclaan lahaa inuu xasuusto wax kasta oo ay u baahan yihiin. Si kastaba ha noqotee, tani caadi ahaan ma aha kiis marka dadku ay la kulmaan dhacdooyin badan kuwaas oo ku adkeynaya arrintan. DMAA waxay noqon kartaa kaalmo wax ku ool ah xagga hore.
Cilmi-baarisyada la sameeyey ee isticmaalayaasha wax-qabadkan waxay muujiyeen in kuwa ku lugta leh ay heystaan ​​xusuusin gaaban ka hor inta aan la isticmaalin. Sidaa darteed, inkastoo dad badani ma qaadan doonaan daroogada iyada oo ujeedadu tahay in ay tan gaarto, waxay u iman doontaa sidii ay saameyn ku yeelato isticmaalka. Taasi waa mid ka mid ah faa'iidooyinka asaasiga ah ee dad badani ka soo baxaan isticmaalka DMAA xitaa tani waxay dhacdaa iyada oo aan la qorsheynin.
Ficil-celinta sarreeya ayaa sidoo kale ah mid caan ku ah in ciyaartoy badani ay jeclaan lahaayeen inay waayaan. Isticmaalka DMAA waxay u keentaa jirka inuu noqdo mid aad u feejignaan leh, tani waxay hagaajisaa awoodda waxqabadka. Taas macnaheedu waa in dadka isticmaala DMAA ay si firfircoon u shaqeeyaan gaar ahaan inta lagu jiro jirka dhismaha ama tartamada. Daroogadu waxay ku shaqaysaa hagaajinta heerka qiyaasta jidhka.
Tani waxay keentaa hababka jirka si ay u dhacaan heer deg deg ah oo caadi ah. Tani waa muuqaal ahaan muuqaal ahaaneed oo leh shakhsi aad u firfircoon oo feejignaan leh. Si kastaba ha noqotee, xiritaanka kaliya ee ku yaala xudduuda gaarka ah waa in isticmaalka daroogada ee tartamada la mamnuuco.
Sidaa daraadeed, isticmaalkeeda si loo hagaajiyo ficil celinta cayaaraha inta lagu jiro ciyaaraha fudud lama oggola. Si kastaba ha ahaatee ayaa wali loo isticmaali karaa cayaartoyda inta lagu guda jiro bakhti-galinta si ay u gaarsiiyaan xawaaraha iyo horumarinta xawaaraha.
Miyuu Dammaanooyinka DMAA Safe?
Tani waa inay noqotaa mid walaac ah qof kasta oo ka qeybgalaya ciyaaraha tartanka. Daawada ayaa lagu qoray liiska daawooyinka aan khatar u ahayn isticmaalka ururada adduunka adduunka. Miisaanyo badan oo badan ayaa leh xaddidaadda isticmaalka DMAA gaar ahaan xukunada. Si kastaba ha ahaatee, tani waa mowduuc ay soo bandhigtay aragtiyo kala duwan.
Hay'adda Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA) waxay tixgelin siinaysaa DMAA si ay u noqoto mid aan amaan ahayn oo la isticmaalo dadka. Hay'addu waxay ku doodaysaa in aysan jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan tallaabada DMAA ee u qalantaa inay noqoto daroogada amaanka ah ee loo isticmaalo. Bogga internetka ee hay'adda, jirku wuxuu dadka kala taliyaa in ay ka fogaadaan isticmaalka daroogada dhammaan kharashaadka maxaa yeelay waxay awood u leedahay inay halis ku noqoto halis caafimaad.
Mid ka mid ah welwelka ugu muhiimsan ee FDA waa awoodda daroogada si ay u keento dhiig-bax. Tani waxay ku doodaan waa horey u ah cadaadis dhiig oo sareeya taas oo ugu dambeyntii keeni karta geeri haddii aan la qaban wax yar oo ku filan. Dhibaatooyinka kale ee neefmareenka ee ay u badan tahay in ay la kulmaan isticmaalka DMAA waxaa ka mid ah dhibaatooyin neefsasho, wadna xanuun iyo suurtogalnimada sarraysa.
Sida laga soo xigtay FDA, isticmaalka daroogada sidoo kale waxay u badan tahay inay keento xanuunka neerfaha sida badanaa waxay ku shaqeeyaan iyada oo saameynaysa habka dhexe ee dareenka. Tani waxay noqon kartaa mid khatar ah sababtoo ah waxay keeni kartaa in la naafo ah iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo halis ah.
FDA waxay ahayd mid aad u adkaysatay si loo hubiyo in DMAA ay ku jirto maaddooyin dheeraad ah laga ciribtiro suuqa oo dhan. Furaha tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadeen waxay soo saareen kiimiko daroogo leh waraaqo kulaalaya iibinta DMAA oo ay ku jirto maaddooyin dheeraad ah. Haddii ay u dhacaan si ay u helaan aruurinta noocyada kale ee roogaga, hay'addu waxay waydiisaneysaa iibiyeyaasha in ay burburiyaan ayna iska ilaaliyaan in ay amar ka keenaan soo saarayaasha.
Illaa iyo hadda, shirkado badan ayaa u hoggaansamey. Ololahaani wuxuu bilaabmay 2012, waxana uu si buuxda u saameynayaa maadaama ay jirto iibka aadka u hooseeya ee dheeraadka ah ee DMAA. Waxaa sidoo kale jira kiisas ay shirkadaha qaarkood ay sii wadaan inay soo saaraan DMAA xitaa markii la weydiisto inay joojiso FDA.
Xaaladaha noocan oo kale ah ayaa lagu arkay 2013 marka shirkad loo yaqaan 'USPLabs' ay diiday in ay joojiso wax soo saarka. FDA waxay joojisay hawlgalkeeda, shirkadduna su'aashu waxay ahayd inay burburiso alaabadii horeba suuqa. Qiimaha tafaariiqda la saadaaliyay waxay ahayd $ 8 million.
Tani waxay muujineysaa illaa inta ay hay'addu diyaar u tahay in ay hubiso in wax soo saarka DMAA la keeno oo la joojiyo oo aysan ahayn hal daroogo oo isku mid ah u helaya waddada muwaadiniinta. FDA ayaa tagtay tallaabo dheeraad ah waxaana lagu taxay magacyada kala duwan ee ay shirkaduhu isticmaali karaan si looga hortago macaamiisha inay ogaadaan in ay isticmaalayaan DMAA. Tani waxay ahayd ka dib markii ay hay'addu ogaatay in shirkado badani ay soo saareen daroogada magacyo qaawan ah si looga hortago in macaamiisha ay si toos ah u aqoonsadaan daroogada mamnuuca ah.
Qaar ka mid ah magacyada liiska madow waxaa ku jira Geranamine iyo Methylhexanamine. Shirkadaha kale waxay muujinayaan in dheeraadka ah ay ku jiraan dhirta geedka Geranium. Tani waxay muujinaysaa joogitaanka DMAA. FDA ayaa ka digtay in macaamiisha ay ka digtoonaadaan wax kasta oo dheeraad ah oo ay ku jiraan waxyaabo ka soo jeeda Geranium.
Xayiraaddu waxay la mid tahay waddamada kale sida Kanada iyo New Zealand iyo kuwo kale oo badan oo adduunka ah. Walaaca ugu weyn ee la soo gudboonaada waa waxyeellada nidaamka neefsiga. Wakaaladda anti-doping dunida ayaa sidoo kale liis garaysay Budada DMAA daawooyinka aan khatar u ahayn isticmaalka aadanaha. Tani macnaheedu waa in la mamnuucay isticmaalka cayaaraha ku lug leh tartamada sida Koobka Aduunka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo ogol yahay isticmaalka tartamada qaarkood gaar ahaan qiyaasaha hooseeya ee ku jira heerarka loo oggol yahay. Si kastaba ha noqotee, marwalba way fiicantahay in la hubiyo xaddidaadaha tartanka kaasoo mid ka mid ah ka qaybqaata kahor intaadan qaadin daroogada si looga fogaado degsiimada dhibaatada.
Mowduuca haddii DMAA tahay mid amaan ah waxay qaadatay isbeddel kale ka dib dacwooyin kala duwan oo u dhexeeya FDA iyo shirkado kale. Shirkadaha ayaa wali ku adkeysanaya in aysan jirin wax waxyeelo ah oo la xidhiidha iibinta nacnaca daroogada. Mid ka mid ah baaritaan ayaa keenay in DMAA dhab ahaantii ahayd wax soo saarka geedka Geranium taasina waxay ka soo horjeedaa FDA.
Si kastaba ha ahaatee, hay'addu ma bixin wax caddayn ah oo taageeraya in ay soo celiso sheegashadoodii ah in daroogada ay tahay mid si sahlan loo helo. Sida laga soo xigtay dhakhtarka baadhay sheegashada badbaadada isticmaalka dheeraadka ah, wax saameyn ah lama filayo in qof caadi ah oo caafimaad qaba uu si sax ah u isticmaalo. Daawada ayaa ku dooday in qadarka daawada DMAA ee laga helay ka hor intaan tababarka ka hor ay ahayd mid ka hooseeya waxa loo tixgelinayo inay sun yihiin isticmaalka aadanaha.
Baaritaan kale, dhalinyarada isticmaala DMAA sidii duufaan markii ay kooxuhu heleen in ay yeeshaan cudurka xanuunka caadiga ah, madax-dhiigfuran maskaxeed. Tani waxay sii wadi doontaa dalabka FDA ee ku saabsan amaanka isticmaalka DMAA ee dheeraadka ah. Si kastaba ha ahaatee, baadhitaan kale ayaa FDA caddeeyay taageerada caddaynta ka dib markii la ogaaday in dhalinyarada su'aashu ay isticmaaleen qadar aad u sarreeya daroogada.
Waxaa la ogaaday in ay qaataan kiniinada mid kasta oo ku yaal agagaarka 600mg ee walaxda firfircoon. Tani waxay aheyd mid aad u sareysa sida muuqaal caadi ah, iyo inta ugu badan ee la filayo waxay ku dhowdahay 60mg hal kiniin dheeraad ah. Tani waxay ka dhigan tahay in dhalinyaradaani ay cuneen toban jeer wixii laga filayey inay qaataan.
Marka la eego qodob cilmi-baaris ah, daroogada ayaa loo tixgelin karaa daroogo horay u-shaqeyn ah oo lagu ilaaliyo iyada oo la bixinayo qiyaasaha ku haboon ee daawooyinka. Haddii DMAA la qaato qiyaasta ka sarreeya 75mg, waxaa jira fursado ah in sare loo qaado cadaadiska dhiigga heerarka aan la rabin, sidaas awgeed waa in la tixgeliyaa. Daawada waa in loo isticmaalo oo keliya shakhsiyaadka aan hore u laheyn cadaadis dhiig oo sarreeya maaddaama isticmaalka uu sii xumayn karo xaaladda.
Sidoo kale, inkasta oo FDA ay shaki gelineyso shirkado badan oo soo saaraya daroogada, waxay leeyihiin dhibic ku saabsan isticmaalka DMAA. Sidaas daraadeed lagama maarmaan in la yareeyo walaacooda waxayna sii wadaan inay iibsadaan siyaabaha laga helo suuqa madow. La tashiyada dhakhtarka ka hor inta aan la isticmaalin budada DMAA pre-workout waa qasab.
Tani waxay xaqiijin doontaa in natiijooyinka la rajeynayo la gaaro iyada oo aan lagu shubin nabadgelyada caafimaadka ee isticmaalaha.
Maxaad ubaahan tahay inaad ogaatid ka hor intaanad qaadin daawooyinka DMAA?
Waxaa jira xaqiiqooyin badan oo ah in waxqabad kasta oo kor u qaadaya cayaaraha waa in uu la yimaadaa kahor inta aan la dejin DMAA oo ah daroogada horay loo soo doortay ee daawada. Qaar ka mid ah waxyaabahaan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee mid ka mid ah ay u badan tahay inuu la kulmo iyo sidoo kale faa'iidooyinka aad ka faa'iideysan doonto isticmaalka.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad ogaato waa in saameynta isticmaalka daroogada ay la mid tahay waxa la dareemi karo ka dib isticmaalka kookeynta iyo methamphetamine. Tani waxay ka dhigan tahay in suurtogalnimada in la horumariyo mukhaadaraadku aad u sarreeyo iyada oo ay ku jirto kaalinta ugu sareysa ee kiciyeyaasha ugu awoodda badan. Waa inaad ka digtoonaataa in aad furi kartid jirkaada mid ka mid ah waxyaabaha ugu xoogga badan adigoo isku dayaya inaad hagaajisid tababarkaaga.
Si looga fogaado fursadaha haysashada maandooriyaha, waa inaad hubisaa inaad si adag u raacdid waxa uu dhakhtarkaagu aaminsan yahay inuu kuugu badbaado caafimaadkaaga. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la fahmo in isticmaalka daroogadu uu si toos ah u saameynayo habka dhexe ee neerfaha. DMAA waxay u dhaqmeysaa sida caffeine iyadoo hoos u dhigeysa heerka soodhoweynta ee CNS taasoo jidhkaaga ka dhigaysa mid heersare ah.
Daroogadu waa ka xoog badan yahay kafeein waxayna jidhkaaga siin doontaa burqad tamar ah oo aad u baahan tahay inaad ku bilawdid casharkaaga jimicsiga farriin sare. Sidaa daraadeed, mar kale waa muhiim in la hubiyo qiyaasta aad isticmaashid maandooriyaha sida tooska ah u saameynaya mid ka mid ah qaybaha jirka ugu nugul. Xaaladda lagu soo warramey 2012, koox dhalinyaro ah ayaa u isticmaashay isticmaalka daroogada inta lagu gudajiro xisbi.
Waxay cuneen toban jeer ka badan wixii loo baahnaa qiyaasta hal mar. Ujeedadu waxay ahayd in si dhakhso ah loo helo, taasina waxay noqotey inay noqoto mid gaabis ah. Daroogadu waxay saameeyeen nidaamkooda dareenka dhexe, badankoodana waxaa la ogaaday in ay qabaan istaroog maskaxeed oo maskaxda ku jira oo ah xanuun jirran.
Isticmaalayaasha sidoo kale waa in ay fahmaan in ka duwan dheellitooyin badan oo kale oo ka horeeya tababarka hore ee ay ku jiraan nitric oxide, DMAA waxay sababtaa dhiig-baxa xididada. Tani waxay ka dhigan tahay in qofkii qaatay kaniiniyada DMAA uu hoos u dhigo xididdada dhiigga marka loo eego qof kale oo aan lahayn. Xaaladdani waxay noqon kartaa mid dhimasho ah haddii ay ku dhacdo qof qaba dhibaato dhiig kar oo sarreeya sida ay u badan tahay inuu sii kordhayo heerka xanuunkiisa.
Sidaa daraadeed, qof ka cabanaya cadaadis dhiig oo sarreeya waa inuu iska ilaaliyaa isticmaalka DMAA.
Isticmaalka daroogadu waxay u badan tahay inuu keeno socodka dhiigga iyo dareenka tamarta sare. Isku xirka dheeraadka ah ee daroogooyinka kale ee kor loo qaado ayaa khatar noqon kara maxaa yeelay taasi waxay sababi kartaa jirkaaga inuu yeesho tamar aad u weyn oo aanad suurtagal noqon karin. Waxaa lagugula talinayaa inaad fahamto in DMAA ay tahay tan ugu horeysa ee ku-darka ka hor inta aan loo isticmaalin ujeedooyin kale.
Dadka qaar ayaa hore u isticmaalay daroogada sii kordhaysa, laakiin taasi waa qalad. Waxay u horseedi kartaa inay u gudbiso miyir-beel haddii lagu xadgudbo oo tanna waa in mar walba la tixgeliyaa inta lagu jiro isticmaalka.
Tababarka ka hor DMAA iyo saameynta daaweynta ka hor
Ka dib marka la isticmaalo DMAA, dadka qaarkood waxay la kulmeen waxyeelo ka soo horjeeda tallaabooyin ay ka mid yihiin lallabbo iyo matag. Tani waa caadi, waxayna macnaheedu tahay in jirkaada laga yaabo inuu si xun ula dhaqmo daroogada. Si kastaba ha noqotee, matag iyo lallabbar maaha inay si toos ah u sababaan isticmaalka DMAA. Kiimikadu waxay ku jirtaa waxyaabo dheeraad ah oo ka kooban kuwa kale, waxayna sidoo kale noqon karaan sababo matag.
Ka sokow, saameynaha kale ee ka hor shaqeyntu waxay ku badan yihiin isticmaalka kiciyeyaasha sida DMAA. Waxaa ka mid ah:
Xaaladaha hurdada oo jajaban
Qodobo dheeraad ah ayaa la yimaada qaybaha kala duwan ee dadka laga dhaafo isticmaalka, iyo furaha iyaga ka mid ah waxaa ka mid ah hooyooyinka nuujinaya iyo kuwa uurka leh. Sababta ka danbeysa tani waa sababta oo ah haweenka uurka leh, isticmaalka daroogada waxay u badantahay in ay saameeyaan horumarka ilmaha aan dhalan. Si kasta ha ahaatee, inkasta oo macluumaad badani la heli karo oo ku saabsan isticmaalka waxyaabo badan oo loogu talagalay kooxaha kala duwan ee dadka, tani ma aha kiiska daawooyinka DMAA pre-workout.
Waxaa jira macluumaad aad u faahfaahsan oo ku saabsan tan. Sidaa daraadeed, kuwa doonaya inay isticmaalaan DMAA inay yihiin daroogo horay u shaqeynaya oo uur leh ama uurka leh ama nuujin waa inay iska ilaaliyaan inay sidaa sameeyaan maadaama ay jiraan macluumaad aad u yar oo ku saabsan saameynta daawooyinka la filayo. Tani waxay noqon doontaa hab nabdoon halkii laga yareeyn lahaa isticmaalaha si ay saameyn ugu yeeshaan marnaba aysan ka fikirin.
Daroogada DMAA waxaa lagu tilmaamay inay tahay kicin. Tani waxay ka dhigan tahay inay u egtahay in ay si xun u saameyn karto suurtogalnimada qaliinka qaaska ah gaar ahaan marka la qaado ka hor qaliinka. Sidaa daraadeed si looga fogaado xaaladdan, waxaa lagugula talinayaa in aad iska ilaaliso isticmaalka haddii laguu qoondeeyo qalliinka qalliinka.
Waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato inaad qaadato wixii daawo ah ka hor qaliinka. Tani waa inaad ka fogaato cadaadiska dhiigga oo sarreeya oo dhiman kara inta lagu jiro qalitaanka.
Tani waa saameynta ugu muuqashada badan ee la mid ah dadka isticmaala DMAA. Tani waa sababta oo ah daroogadu waa kicin iyo daawooyinka ugu badan ee fasalkan la og yahay in ay keenaan cadaadis dhiig oo sarreeya gaar ahaan marka lagu xadgudbo. DMAA waxay keenaysaa in cirbadaha dhiigga la gooyo, tani waxay keentaa in dhiiggu ku socdo heer ka dhakhso badan sida caadiga ah ee keena cadaadiska dhiigga oo sarreeya.
Sababtoo ah waxyeelladan, adeegsiga DMAA ayaa la ogaaday inay sababi karto cudurrada kale ee xun sida maskax-wareerka maskaxda. Marka laga hadlayo calaamaddan, isticmaaluhu waa inuu iska ilaaliyaa isticmaalka daawada markiiba. Sababtoo ah isticmaalka joogtada ah waxay u badan tahay in ay kor u qaaddo calaamadaha waxayna keeni kartaa dhimasho.
Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtogal ah in laga hortago cadaadiska dhiigga oo sareeya iyada oo loo marayo isticmaalka kontroolka Tani waxay ku siin doontaa natiijooyinka ugu fiican haddii ay fududeyneyso daawo qaadaya imtixaanada si loo ogaado waxa qiyaasta ku haboon.
Intee in le'eg ayuu DMAA ku jiraa nidaamkaaga?
Wadada ugu caansan ee maamulka DMAA waa afka. Marka habkan la qaato, daroogada ayaa qaadan doonta ilaa sideed daqiiqo si ay u gasho dhiigga macaamilka. Si kastaba ha noqotee, saameynta looma ogaan doono isla markiiba maadaama daroogooyinka intooda badani ay yihiin waxa loogu yeedho muddada nus-nololeedka. Tani waa wakhtiga loo baahan yahay daroogada si loo kala diro oo loo sii daayo maaddooyinka firfircoon ee jidhka si loogu isticmaalo.
Nolosha nuska ah ee DMAA waxay ku saabsan tahay saacadaha 8. Sidaa daraadeed, shakhsiyaadka doonaya inay kor u qaadaan jirkiisa kahor inta aan la qaban casharka waa in ay qaataan saacadaha 8 ka hor intaysan siin waqtigii loogu talagalay daroogada in loo nuugo jirka.
Ka dib markaad isticmaasho daroogada, dareenka guud ee sarreeya waa khibrad. Caadi ahaan, tani maahan dareen ah in dadka intooda badani ay jeclaan lahaayeen in ay la kulmaan wakhti kasta waqtigooda gaar ahaan marka aysan shaqeynin. Sidaas awgeed, baahida loo qabo in la ogaado waqtiga loo qaato daroogada in laga saaro jirka ka dib isticmaalka.
Celcelis ahaan, daroogada ayaa lagu xafidayaa jirka oo ku saabsanaa maalinta 24-saacadood ka dib marka dareenka aan la ogeyn.
Faa'iidooyinka DMAA ee Fataha Gubashada
Waxaa suurtagal ah, inaad maqashay fikrado iyo xaqiiqooyin badan oo ku saabsan awoodda DMAA ee miisaanka lumay oo aad jeceshahay inaad ogaato midkastaa macno samaynaysa. Waa hagaag, xaqiiqda arrintu waxay tahay in dhejinta DMAA ay kaa caawin karto inaad miisaan aad u badan oo siyaabo kala duwan ku dhajiso.
Ugu horreyn, kaalmada dheeraadka ah ee Dimethylamylamine waxay kaa caawin kartaa inaad kordhiso xooggaaga iyo dhiirigelinta ilaa heerka kordhinta dulqaadkaaga xanuunka iyo tamarta. Awoodda kor u kaca iyo dulqaadka xanuunku waxay kaa caawineysaa inaad si guul leh u qaadato miisaan culus oo culus.
Marka ay timaado gubashada dufanka jirka, 1 3 Dimethylamylamine waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee gubashada dufanka. Sida ugu badnaan badan ee macdanta gubta ee sumcadda leh, DMAA waxay kicisaa dufanka gubanaya si ka dhakhso badan marka loo eego kiis marka gubashada dufanka ay aad u badan tahay inaaney dhicin.
Ma waxaad ka yaabban maxay tahay dmaa inaad gubto dufanka jidhkaaga?
Waa hagaag, DMAA waxay kor u qaaddaa tamartaada iyada oo loo marayo walax-woqooyiga, geedi socodka kaas oo ku lug leh xaddidaadda socodka dhiiggaaga. Socodka dhiigga ee xadidan wuxuu keenaa korriinka murqaha iyo sidoo kale kicinta murqaha. Sidaa darted, xaddiga dheef-shiid kiimikaadkaaga ayaa kordha, taasoo keeneysa in si dhakhso ah oo firfircoon oo duxda jirka ah loo gubo.
Dhismayaasha DMAA, ephedrine iyo amphetamines waxay wadaagaan waxyaabo isku mid ah. Markaa, DMAA waxay kicin kartaa nidaamka dareenka dhexe ee aadanaha, taasoo keenta in maskaxda ay sii dayso norepinephrine. Sidoo kale, waxay ka dhigeysaa alfa iyo beta-qabayaasha jirka in ay yeeshaan firfircoonida noradrenaline, taas oo keentay in ay si toos ah u kiciyaan habka difaaca adrenergic.
Labada tallaabo ee isku dhafan ayaa keenaya kororka dheef-shiid kiimikaadka iyo sidoo kale burburka dufanka ka soo baxa unugyada adipose si loo soo saaro tamar - geeddi-socodkan waxaa loo yaqaannaa lipolysis.
Saameynta DMAA si weyn ayaa loo kordhin karaa haddii loo isticmaalo waxyaabo kale oo kiciya sida kaafeyn.
Haddii la isku daro kafeyn, saameynta DMAA ee heerka dheef-shiid kiimikaadka waxay kordhineysaa 35% halka firfircoonida dufanka gubanku uu kordho wax ka badan 169%.
Daraasad dhowaan la sameeyay si loo baaro waxtarka DMAA ee gubashada baruurta, 32 dadka qaangaarka ah oo caafimaad qaba oo halmar kaabayaal ah oo ka mid ah maalintiiba ku bixiyay maalmaha 14 waxay la kulmeen lumis weyn oo fatu.
Sida daroogooyinka kale, DMAA waxay u badan tahay inay yeeshaan waxyeellooyinka qaarkood haddii lagu xadgudbo. Waa kuwan qaar ka mid ah suurtogalka Dhibaatooyinka dhinaca DMAA:
Inkastoo aysan jirin wax caddeymo ah si toos ah ugala xiriiraya DMAA si toos ah dhiigbaxa maskaxda, waxaa jira xaalad la soo wariyay qofkii sameeyay xaalad kadib markii la isku daro khamriga iyo isku dhafka DMAA. Hase yeeshee, waxaa muhiim ah in la ogaado in DMAA aan la isticmaalin khamriga haddii kale waxyeellada noocaas ah waxay u badan tahay inay ku adkaato.
Hawlaha ugu muhiimsan ee beerka waa in la xareeyo dhiigga dheef-shiidka ka hor inta aanuu u oggolaanin inuu u gudbiyo qeybaha kale ee jirka. Ka sokow, beerka ayaa metabay daawooyinka iyo sidoo kale sunta kiimikada.
Marka aad qaadato kiniiniga DMAA ama dheeraad ah, beerku waa inuu wax ka qabtaa qayb ka mid ah daroogada / kabista. Sidaas darteed, beerku waxaa laga yaabaa in uu ku dhaco dhirta enzyme kaasoo keeni kara sun ah. Daawada ayaa sidoo kale waxay keeni kartaa bararka beerka kaas oo waqti u keeni kara dhaawac beerka joogta ah ama cirrid.
Iyadoo la tixgelinayo in ay tahay kicin, Dimethylamylamine waxay kordhin kartaa cadaadiska dhiigga. Sidaa daraadeed, dadka qaba hurgumada dhiigga ee sareeya waa inay iska ilaaliyaan qaadashada daawada ama daawooyinka ay ku jirto.
4. Wadne garaacsan oo aan caadi ahayn (xajmiga wadnaha)
Inkastoo marar dhif ah, saameynta kicinta ee DMAA waxay u horseedi kartaa garaaca wadnaha oo deg-deg ah waxayna taasi ka sii dari kartaa qalqalaha wadnaha ee dadka qaba cudurkan. Sidaa darteed, haddii lagugu jadwalayo qalliinka, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato DMAA laba toddobaad kahor taariikhda qalliinka, haddii kale, cadaadiska dhiigga ee kor u kaca iyo wadnaha oo aan joogto ahayn sababtoo ah saameynta daroogada ayaa faragelin karta hawlgalka qalliinka.
Daraasad la sameeyay si loo baaro saameynta DMAA, natiijooyinka ayaa tilmaamaya in 12 dadka waawayn ee caafimaadka qaba mid kasta oo ka mid ah kuwaa oo cunay laba keedh oo ah OxyELITE Pro, oo ah cunto dheellitiran oo ay ku jirto Dimethylamylamine, waxay leedahay garaaca wadnaha oo kor u kacay iyo weliba dhiig karka.
Si kastaba ha ahaatee, siddeed qof oo qaan-gaar ah oo caafimaad qaba oo qaatay qiyaasta milanka 25 ee DMAA waxay yeesheen garaac wadnaha caadi ah iyo cadaadiska dhiigga xitaa ka dib qaadashada daroogada. Tani waxay caddaynaysaa in daroogadu aysan wax saameyn ah ku yeelanaynin garaaca wadnaha ama cadaadiska dhiigga haddii la cuno qiyaastaas.
5. Kicinta Glaucoma
Marka laga reebo saameynta kicinta, Dimethylamylamine ayaa sidoo kale keena dhirirka dhiigga. Isku darka labadan saameyn waxay keeni karaan kor u kaca noocyada glaucoma. Sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa inaad iska ilaaliso qaadashada daawada haddii aad qabto glaucoma.
Waxaa sidoo kale jira xaalado ku saabsan waxyeellada beerka taasoo ka timid isticmaalka DMAA. Shan sano ka hor, dadka 36 ee qaata OxyELITE Pro, oo ah cunto dheellitiran oo leh DMAA sida qayb ka mid ah, ayaa lagu sheegay in dhaawac beerka soo gaadhay. Mid ka mid ah bukaannada ayaa dhintey halka laba qof oo kale ay ku guuleysteen inay ku noolaadaan kadib beerka beerka.
Waxaa haboon in la ogaado in dhammaan bukaannada 36 ay qaataan qiyaasta lagu taliyey ee dheeraadka ah laakiin 27 oo iyaga ka mid ah ayaa qaatay barnaamijka DMAA oo bilaash ah oo dheeraad ah. Sidaa daraadeed, ma fududa in la helo dhismaha sunta sunta ah ee dheeraadka ah.
7. Dhiig karka
Isticmaalka DMAA ayaa sidoo kale lala xiriiriyay dhiig-baxa maskaxda. Xaqiiqdii, saddex kiis oo dad ah oo dhiig ku yimid maskaxda kadib markii la isticmaalay DMAA ayaa la soo wariyay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday in dhibanayaashu ay si joogto ah u isticmaalaan daroogada ama khamriga ama kafeyn.
Mid ka mid ah kiisaska, qof caafimaad qaba ayaa qaatay qadarka talaalka ee cuntada dheeraadka ah ee uu ku jiro Dimethylamylamine iyo ka dibba, wuxuu bilaabay inuu la kulmo madax xanuun culus oo uu raaco dhiigbaxa maskaxda.
Waxaa jira kiis la soo sheegey oo ah nin caafimaad qaba 22 oo sameeyey wadne qabad kadib markii la isticmaalay Jack3d, oo ah cunto dheellitiran oo ay ku jirto DMAA oo la socota kafeyn mudo ah saddex toddobaad.
Mid ka mid ah daraasadda dib u eegista saameynta daawada DMAA ayaa muujisay in 15% dadka 56 ee qaatay daawooyinka ku jira daroogada (OxyElite Pro) matag iyo labbo labbo ah ka dib markii ay qaataan daawooyinka dheeraadka ah. Si kastaba ha ahaatee, ma jirin wax caddayn ah oo muujinaya inay tahay DMAA ee dheeraadka ah taas oo keentay lalabbo iyo matag ama waxyaabo kale oo miisaan leh.
10. Jilicsanaan ku-meel-gaar ah
Waxyeellada ugu caansan ee la xidhiidha isticmaalka DMAA waa luminta tamarta ('shil') qiyaas ahaan saacado yar ka dib qaadashada daroogada. Si kastaba ha ahaatee, ma aha qof kasta oo isticmaala daroogada khibradahan.
Waxyeellooyinka kale ee suurogalka ah ee DMAA waxaa ka mid ah:
Waxay sababtay cadho
Dhimashada (inkastoo dhif ah)
Kuwani waa qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee DMAA. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax baaritaan ah oo keliya oo falanqeynaya saameynta daawada ee daroogada. Inta badan daraasadaha ku saabsan saamaynta maandooriyaha waxaa ku jira cuntada dheeraadka ah ee DMAA sida mid ka mid ah maaddooyinkeeda halkii ay ka ahaan lahayd daroogada ee go'doominta. Iyadoo la tixgelinayo in qiyaasta saxda ah ee daroogada ee ku-meel-gaarka ah aan la dhicin, ma jiraan wax sax ah oo lagu soo gebogebeynayo in saameynaha daawadu ay tahay natiijo ka timid DMAA. Waxyaabaha kale ee maaddooyinka lagu daro waxay noqon karaan sababaha saameyn xun.
Ka sokow, xaaladaha qaarkood, saameynta xun waxay ka dhalanayaan waxyaalo badan oo ka yimaada alaabta ku salaysan DMAA. Qaar ka mid ah dadka isticmaala kuwaas oo la kulmay saameentooyinkan ayaa lagu soo warramey in ay qaadeen xaamiin 1,000 maalin kasta. Xaaladahaas oo kale, saameynta waa laga hortagi karaa haddii mid ka mid ah u dhajiyo qiyaasta saxda ah ee saxda ah. Waxaan ka hadli doonaa qiyaasta saxda ah ee DMAA mudo gaaban.
Ka sokow, 1, 3 Dimethylamylamine ayaa laga helay saameyn aad u kacsan nidaamka dhexe ee dareenka ah haddii loo isticmaalo kiciyeyaasha CNS ama dareeraha waxyeellada ee saameeya nidaamka adrenergic. Tani waxay keeni kartaa waxyeelooyin kala duwan. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad iska ilaaliso saameynta, hubi inaadan ku darin DMAA kiciyeyaasha ama nootropic.
Sidoo kale, waxaa lagula talinayaa in daawooyinka DMAA aan loo isticmaalin maalin kasta. Marka, waa maxay qiyaasta saxda ah ee Dimethylamylamine?
Qaadashada dimethylamylamine saxda ah waxay ku xiran tahay arrimaha kala duwan sida da'da iyo xaaladda caafimaad ee isticmaalaha, xaaladaha kale. Si kastaba ha ahaatee, hadda, ma jirto macluumaad cilmi ah oo ku filan oo lagu kalsoonaan karo si loo dhiso qiyaasta saxda ah ee daroogada.
Haddii aad iibsatay alaabada DMAA ee dufanka / miisaankaaga, hubi inaad akhrido oo aad raacdo barashada isticmaalka ee calaamaddeeda oo la tasho dhakhtarkaaga, farmashiistaha ama khabiir kale oo khibrad daryeel caafimaad leh ka hor intaadan isticmaalin.
Caadi ahaan, qiyaasta bilowga ah ee DMAA waxay u dhexeysaa mgmaanka 10 ilaa 20mg. Ama ½ ka mid ah adeegga DMAA-ku darida waxyaabaha aad dooratay. Tani waxay kaa caawineysaa inaad aragto oo dareento sida daroogadu u saameyn karto haddii aad qaadato qadar buuxa.
Waqtiga ay socoto, waxaad kordhin kartaa qiyaasta mgc 40 ama 60 mg maalintii. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto caddayn dhab ah oo taageeraya qiyaasta qaadashada.
Waxay u eg yihiin qiyaasta caadiga ah ee alaabooyinka ay ku jiraan dimethylamylamine. Qiimayaashu waxay ka dhalanayaan talooyinka isticmaalka ee ay bixiyaan kuwa wax soo saarka DMAA ee hadda suuqa.
Waa inaadan maalin kasta isticmaalin alaabta DMAA haddii aad rabto inaad gaarto natiijooyinka ugu fiican. Inta badan qaybaha DMAA waxay u isticmaalaan laba illaa seddex jeer toddobaadkii inta badan. Adiga oo isticmaalaya waxyaabaha dheeraadka ah ee soo noqnoqda, waxaad si fudud u maamuli kartaa inaad iska ilaaliso inaad ku tiirsanaato alaabooyinka.
Sida ugu wanaagsan, u isticmaal kaniiniyada DMAA marka aad u baahan tahay tamar ama diiradda saarista ama ku dhowaad daqiiqo 30 ka hor inta aan la sameyn jimicsiga jirka. Marka aad sidaas samaynayso, waxaad awoodi doontaa inaad iska ilaaliso qaar horay u soo kabashada shaqada ka hor.
Best 4 ee ugu wanaagsan dunida oo la iibiyo daroogooyinka gubanaya
Waxaa jira daroogooyin kala duwan oo gargaar ka geysan kara fatahaada iyada oo la yareeyo xuriyeynta, kordhinta dheef-shiid kiimikaadka iyo / ama ilaalinta rabitaanka cuntada. Daawooyinka gubta ee guban kara sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu qofku xoojiyo karti-darida isagoo kordhinaya tamarta ama diiradda.
Shaxda soo socota waxay muujineysaa afarta darajo ee iibka dufanka gubanaya adduunka oo dhan.
Magaca Darooga iyo Lambarka CAS Sida ay u shaqeyso
Kombiyuutarrada "Synephrine" -CAS: 94-07-5 Daawada budada ah ee loo yaqaan "Spectra" waa beta-agonist oo ka shaqeeya kor u qaadista heerka dheef-shiidka jirka, isticmaalka kalooriga iyo heerarka tamarta
1,3-dimethylamylamine (budada DMAA) - CAS 13803-74-2 Iyadoo dhismaha kiimikada ee ebidrine ah, 1,3-dimethylamylamine waa naqshadeeyayaasha dareeraha ah ee loo isticmaalo waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu daro nafaqada si loo caawiyo horumarinta ciyaaraha fudud iyo kor u kaca tamarta.
Clinbuterol hydrochloride-CAS 21898-19-1 Marka laga reebo awood koronto leh oo gubaneysa, Clenbuterol hydrochloride ayaa sidoo kale leh saameyn heer-dhexaad ah oo lagu yaqaano "thermogenic" by kordhiya cadaadiska dhiigga iyo keenaya wadnaha si ay u shaqeeyaan ka adag.
Ka sokow, waxay keenaysaa glycogen in ay burburiso, markaa gubashada dufanka jidhka.
Salbutamol (Albuterol) - CAS 18559-94-9 budada salbuterol waxaa markii hore isticmaali jiray dadka qaba neefta ama Cudurka dabaysha ee joogtada ah si loo hagaajiyo neefsashadooda. Si kastaba ha ahaatee, maalmahan, daroogada ayaa si weyn loo isticmaalaa si kor loogu qaado luminta degdega ah, dayactirka muruqa inta lagu jiro nidaamka dufanka lafdhabarta iyo sidoo kale si loo xoojiyo dulqaadka marka mid ka mid ah uu ka shaqeynayo hawlaha luminta fatahaada.
Haddii aad rabto inaad ka iibsato dmaa ama mid ka mid ah daroogooyinka guban ee kor ku xusan, waxaad si fudud uga dhigi kartaa wax dhib ah oo ka yimaada AASraw, com.
1, 3-dimethylamylamine wuxuu bixiyaa manfacyo badan oo ay ka mid yihiin caawinta hagaajinta xasuusta gaaban iyo ficil-celinta iyo sidoo kale dhismaha jirka iyo gubista dufanka jirka. Si kastaba ha noqotee, waa inaad hubisaa inaad la tashatey bixiye daryeel caafimaad oo sharaf leh adigoo raacaya qiyaasta lagu taliyey si aad uga fogaato saameynaha suurogalka ah sida cadaadiska dhiigga sare, dhibaatooyinka wadnaha iyo kilyaha, khataraha kale ee la xariira caafimaadka.
Si kastaba ha ahaatee, raacitaanka qiyaasta saxda ah ma aha damaanad ah in aadan la kulmi doonin dhibaatooyinka xun. Sidoo kale, waxaa habboon in la caddeeyo in aysan jirin caddayn cilmi ah oo ku lug leh saameyntan si toos ah u ah isticmaalka DMAA oo kaliya; taas oo ah, maqnaanshaha waxyaabaha kale ee dheeraadka ah.
Bloomer RJ1, Farney TM, Harvey IC, Alleman RJ - Qalabka Nabadgelyada Kafeinka iyo 1,3-dimethylamylamine supplementation ee ragga caafimaadka leh - Hum Exp Toxicol. 2013 Nov; 32 (11): 1126-36. doi: 10.1177 / 0960327113475680. Epub 2013 Feb 19.
Schilling BK (1), Hammond KG, Bloomer RJ, Presley CS, Yates CR. - Saameynaha nafsiyoolojiga iyo daawooyinka xayeysiinta daaweynta 1,3-dimethylamylamine ee ragga - BMC Pharmacol Toxicol. 2013 Oct 4; 14: 52. doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52.
"1,3-Dimethylamylamine," Examine.com, oo lagu daabacay 24 April 2014, ugu dambeyntii la cusbooneysiiyay 14 June 2018,
Vorce SP, iyo al. Dimethylamylamine: daroogada oo sababaysa natiijooyin wanaagsan oo ah immunoassay ee amphetamines. Jal Anal Toxicol. (2011)
Gee P, Jackson S, Easton J. Kiniin kale oo qadhaadh: kiis laga qaado kiniiniyada xisbiga DMAA. NZ Med J. (2010)
The Merck Index: Ansixinta farsamada ee Kiimikooyinka, Daroogooyinka, iyo Bayoolajiyada (Buugga).
Lisi A, et al. Daraasadaha methylhexaneamine ee dheecaanka saliidda iyo saliida. Baaritaanka Daroogada. (2011)
Bloomer RJ, et al. Saamaynta 1,3-dimethylamylamine iyo kafeyn kaliya ama isku dhafan oo ku saabsan xaddiga wadnaha iyo cadaadiska dhiigga ragga iyo dumarka caafimaad qaba. Dhaqdhaqaaqa ciyaaraha. (2011)
Faahfaahin qoto dheer ee Cypionate Testosterone Xiddiga ugu sareeya 10 testosterone: taas oo kugu habboon?